Awudingi Isazi Se-SEO! | Martech Zone
Awudingi Isazi Se-SEO!
NgoLwesibili, Januwari 20, 2009 NgoLwesihlanu, Okthoba 17, 2014 Douglas Karr
Lapho… ngakusho! Ngakusho ngoba ngibona yonke imali esetshenzisiwe ekwenzeni izinjini zokusesha ngamabhizinisi amancane kuya kwaphakathi nendawo futhi ngicabanga ukuthi iyi-racket. Nawu umbono wami wemboni yokwenza izinjini zokusesha:
Iningi le-Search Engine Optimization liwela ngaphakathi ukubhala okuqukethwe okuhle, ukuheha onegunya ama-backlinks kuya ukuthi okuqukethwe nokulandela izindlela ezimbalwa ezibalulekile ezihamba phambili. Lokhu konke kuyizisekelo umuntu angazilandela - kepha iningi alilandeli.
Ngisabona inqwaba yamasayithi amasha eshaya emakethe okuyizithombe ezisindayo futhi ezilula ngombhalo, ezingasebenzisi izinto ezilula njengezihloko, izihlokwana, njll.. Lezi zeluleko, engizibhale kaninginingi kubhulogi yami futhi ngibona kaningi kwamanye amabhulogi zizothola isayithi lakho libe ngu-99% wendlela.
Iqiniso yilokhu: Uma ubhala okuqukethwe okufanelekile okufaka amagama angukhiye nemishwana abasesha abayifunayo, isayithi lakho lizotholakala. Umthelela walokho okuqukethwe uzokwenza okuncane noma yikuphi ukulungisa okungafinyelelwa noma yisiphi isazi se-SEO. Yeka ukuchitha imali yakho bese uqala ukubhala okuqukethwe!
Abantu abaningi bathanda ukuphikisana nezimfihlo zezinjini ezintweni ezifana nobude be-URL, izixhumanisi eziphumayo, okungekho okulandelayo, njll., Njll ... kepha badlala ku-1% kuphela. Impela, kwamanye amabhizinisi, lowo-1% omncane ungaba umehluko ezigidini zamadola… kepha kimi nawe, uyibhokisi.
Enye imfihlo yomkhakha i-99.99% yomncintiswano wakho ayinayo nencazelo yokuthi benzani. Bhala okuqukethwe okufanele, okuphoqelelayo futhi ungayinqoba impi ekusesheni.
Tags: Ukukhangisa OkuqukethwediyZenzeleindlela yokwenza seoungakusebenzisa kanjani ukuseshaukusebenzisa ngokugcwele injiniseoumeluleki we-seoIsazi se-seo
Shiya Isizinda Sakho ukuze WENZE
Ama-3.24% wabasebenzisi be-Facebook Afile
Jan 20, 2009 ku-2: 10 AM
Kuhle. Incazelo yakho icace bha ukuthi nochwepheshe ubonakala engavumi. Ngiyethemba uzochaza ezinye izinto ezibaluleke ngokufanayo.
Jan 20, 2009 ku-8: 37 AM
Ngiyavumelana nomuzwa wakho wokuthi inyama namazambane (okuqukethwe) kubaluleke kakhulu kunalokho i-gravy (i-SEO optimization), kepha ngiyazibuza ukuthi ngabe uncoma ukuthi ungakhathazeki nge-SEO ngokuphelele…
Ngifundile kuzungeza ama-internets ukuthi kunezinto ama-blogger okufanele azenze ukukhulisa okuthunyelwe, njengokukhetha igama elingukhiye ngokususelwa ekufunweni bese ufafaza lelo gama elingukhiye kukho konke okuthunyelwe okungenani ama-X times kepha kungasekho izikhathi ze-XX, njll.
Ngabe ubona ukuthi kusadinga ukwenziwa, noma kufanele seqe bese simane sigxile ekubhaleni i-web semantic ekugcineni?
Jan 20, 2009 ku-8: 46 AM
Ukulandela imikhuba emihle ye-SEO kufanele. Ukuba nekhasi elenziwe kahle, ukuba nesayithi elisebenzisa amathuluzi afana nemephu yesayithi ukukhombisa izinjini zokusesha ukuthi zibukeke kuphi nokuthi yini ebalulekile, njll.
Baningi kakhulu abantu, ikakhulukazi "ochwepheshe" be-SEO abaphikisana nama-nuances we-SEO kunokuba bamane beluleke amaklayenti abo ukuthi athole ipulatifomu enhle… bese ebhala kuyo. Uhlelo oluhle lokulawulwa kokuqukethwe luzofaka izindlela ezihamba phambili ezidingekayo, noma lube nama-plugins / izengezo eziningi ezizosiza.
Amabhizinisi amaningi amancane amancane kuya kwaphakathi nendawo asebenzisa isikhathi nemali ku-1% esikhundleni sokusebenza lapho angenza khona umehluko ngempela!
Jan 20, 2009 ku-9: 31 AM
Chris, ayikho ifomula ekhethekile yezikhathi ze-X. Kuyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho futhi ama-SEO anolwazi anganaki ngokuphelele imvamisa yamagama asemqoka kepha kufanele uqiniseke ukuthi usebenzisa amabinzana asemqoka nokuhlukahluka kwawo kokuthunyelwe kwakho.
Ukukhetha amagama angukhiye athandwayo KANYE okubhekiswe kakhulu nawo kubalulekile kepha ngicabanga ukuthi lokhu kuwela engxenyeni "yokuqukethwe" yomfanekiso kokuthunyelwe kukaDoug, hhayi ingxenye yochwepheshe be-SEO. Uma i-SEO iyingxenye yecebo lakho lokubloga, kunokukhethwa kwegama elingukhiye kubaluleke kakhulu.
Jan 20, 2009 ngo-4: 39 PM
UJames uqinisile - yilokho engikushoyo ngokubhala okuqukethwe okufanele. Umane awudingi uchwepheshe ukufeza lokhu.
Jan 20, 2009 ku-9: 28 AM
Njenge “SEO” uchwepheshe kumele ngenze umbono lapha. Uma usesha "iwijethi" ku-Google njengamanje, kunemiphumela eyi-128,000,000.
Zingu-10 kuphela eziboniswa ekhasini lokuqala kanti ngu-1 kuphela osendaweni ephezulu. Leyo 10 ingaphansi kakhulu kwe-1% yemiphumela.
Yize lesi kuyisibonelo esedlulele, kanti mina ngenkathi ngivumelana nomqondo wokuthunyelwe kukaDoug, khumbula ukuthi ezimbonini ezincintisanayo i-1% uDoug abalekela kuyo ingahle ibe umehluko phakathi kwendawo ephezulu noma indawo yekhasi lesithathu. Futhi kuyisikweletu sikaDoug usho ukuthi lokhu kwesinye isikhathi kungaba njalo, ngimane ngimele abafowethu be-SEO kancane 🙂 <- kaDoug Thesis, ngaphakathi kwehlaya
Okuqukethwe nama-backlinks ayisisekelo se-SEO. Gxila kuzo uze ukwandise ngokuphelele ukusebenza kwazo.
Jan 20, 2009 ku-10: 01 AM
Siyabonga ngokubhala lokhu - kuhle ukubona imboni esobala ngokwanele ukuthi ingathi “awudingi uchwepheshe” ngenkathi ukhuluma usihlalo onguchwepheshe. Yebo, kuwumsebenzi onzima, kepha yilokho nje okudingekayo.
Jan 20, 2009 ku-10: 15 AM
Angivumelani nezisho zakho eziyinhloko. Ngisebenza ku-SEO futhi ngumsebenzi engiwuthandayo. I-SEO iyisici esibalulekile sokuthuthukiswa kwewebhu esinganakekelwa. Inkinga ukuthi, imvamisa, ayinakwa kuvuna ukwakheka okukhazimulayo nokungenzi kahle.
Kubheke ngale ndlela. Izinkampani azifuni ukucabanga nge-SEO. Bangavele bakhokhele omunye umuntu ukuze acabange ngakho futhi baqiniseke ukuthi bakwenza kahle. Njengoba nje bengathanda ukukhokhela omunye umuntu ukuze acabange ngokwakhiwa. Inkinga enkulu ukuthi abaklami abaningi abacabangi nge-SEO.
Kungani umuntu akhokhela ipulatifomu yebhulogi yeCompendium, kanti kunezinketho eziningi zamahhala ezisebenza kahle? Akuthathi okuningi ukuphonsa i-WordPress kuseva ezenzele yona bese uqala ukubhuloga. Kepha abantu bakukhokhela ubuchwepheshe bakho, futhi yilokho izinkampani ezikukhokhelayo lapho zithenga ukubonisana kwe-SEO.
Ngeke ngiphikise ukuthi kunama-SEO amaningi angazi lutho laphaya, kepha uzogijimela kulokho kunoma yimuphi umkhakha. Iqiniso lodaba ukuthi, ngiyayazi i-SEO futhi ngenza umsebenzi ongcono kakhulu engiwenzayo kumakhasimende.
Ngakho-ke, izinkampani zidinga ochwepheshe be-SEO, uma bengenakukhathazeka ngokufunda nge-SEO uqobo.
Jan 20, 2009 ngo-4: 43 PM
Jonathan - Ngicabanga ukuthi udaba lwami lapha! Isizathu sokuthi kungani umuntu angafuna ukubeka ibhulogi yakhe kwipulatifomu efana ne-Compendium ukuze angakhathazeki nge-SEO!
Ngikholwa ukuthi kunezinkampani ezithile ezisempini ye-4 ephezulu futhi ngithi kukhona i-1% (noma ngaphansi) okufanele ixhumane nochwepheshe we-SEO ukuze abasize.
Okuthunyelwe kwami ​​kumayelana nenkampani ejwayelekile… iningi labo limane lithole ipulatifomu enhle esebenzisa izindlela ezinhle kakhulu ze-SEO, ibhale okuqukethwe okufanele, futhi ikwenze kuphoqe ukudonsa ukunaka. Lokho akudingi 'uchwepheshe'.
Jan 20, 2009 ngo-4: 34 PM
Ngaphandle kokuthi uzinikele ku-100% enjini yokusesha udinga ukuqasha i-SEO. Injini yokusesha ilula kodwa empeleni ukubeka iwebhusayithi kuthatha umsebenzi omningi nolwazi.
Jan 20, 2009 ngo-10: 19 PM
Okuthunyelwe okuhle! Ngikufundele ibhulogi isikhathi eside ngokwanele ukwazi ukuthi ukujabulela ukubuyela emuva okuhle, ngakho-ke nakhu okulandelayo:
Ngicabanga ukuthi uhlushwa "Isiqalekiso Sokwazi". Isiqalekiso soLwazi sivame kakhulu kubantu bezobuchwepheshe (nami ngiyahlukumezeka), futhi kwenzeka lapho bakhohlwa ukuthi kwakunjani ekuqaleni lapho bengazi lutho.
Abantu abanamawebhusayithi webhizinisi elincane badinga ukwazi izinto eziningi uma benethemba lokwenza kahle ezinjinini zokusesha.
Ufunde konke mayelana ne-SEO njengoba wakha leli sayithi, kepha lokho bekuyisikhathi esedlule futhi manje kunzima ukukhumbula zonke izinto ozifundile endleleni.
Nasi isibonelo esisodwa nje esifushane sento oyifunde "kuJobe" ngesayithi lakho:
Lapho uhambisa isayithi lakho kusuka ku-
Lokhu kuthutha bekudinga ukuthi:
Faka futhi uqonde amathuluzi we-Google Analytics kanye ne-webmaster (ukuqiniseka ukuthi izixhumanisi ziyahamba, kanye ne-trafic),
Sebenzisa ukuqondisa kabusha okungama-301 (okukuwe .htaccess file)
Dala ifayela le-robots.txt (elakho alilutho futhi alizenzakalelayo)
Gwema okuqukethwe okuyimpinda nezinkinga zokuqanjwa kwegama
… Nezinye izinto eziningi endleleni.
Ukuhamba kwesayithi lakho bekungeke kube ngumsebenzi olula kumuntu ongeyena uchwepheshe, futhi khumbula, leso yisibonelo esisodwa solwazi oluwusizo oluthole endleleni!
Ubeka kahle kakhulu amagama afana nokuthi "ubuchwepheshe bokumaketha" ngoba ubhala kahle kakhulu, futhi ngoba wazi okuningi nge-SEO.
Ngakho-ke, inqobo nje uma sifaka lezi zici zobuchwepheshe ze-SEO ku- "Best Practices" Ngiyavuma ngokuphelele.
Jan 20, 2009 ngo-11: 27 PM
Ukhathele! Ngempela ungazi kahle, Pat!
Kuyiqiniso ukuthi ngiyayidabula futhi ngiyayishintsha indawo yami ye-SEO kancane. Kodwa-ke, iphuzu lami elingenhla alingibhekisi empeleni, libhekise enkampanini emaphakathi enetheni. Ngiyashintsha futhi ngishintshe futhi ngishintshe kakhulu ngoba ngiyingcweti encane.
Kukho konke ukwethembeka, kungenzeka ukuthi ngenze umonakalo omkhulu kunokuhle ngokuhamba isikhathi eside.
Ukukhulunywa ngeqiniso, ngiphinde ngavuma ukuthi ukube bengibhekise okuqukethwe kwami ​​kangcono futhi, mhlawumbe, ngakha amabhulogi amaningi - ukuthi bengizothola ukunakwa okuningi. Okuqukethwe okuhambisanayo, okuqukethwe okuvamile… kuwina ngaso sonke isikhathi.
Siyabonga ngamazwana amahle!
Jan 21, 2009 ku-3: 55 AM
Uphinda ushaye isipikili ekhanda futhi. Inkinga iba yimbi kakhulu enkundleni yebhizinisi elincane kuya kwaphakathi nendawo ngoba ulwazi lwabo lwewebhu namawebhusayithi lincane futhi baphoqeleka ukuthi bathembele kubaluleki ukuthi babhale futhi bafake okuqukethwe kwabo. Bangabantu abangabacebisi bewebhu futhi bacindezela i-SEO futhi amabhizinisi amancane ayayithenga. Futhi iningi lalaba babonisi ababakhela amasayithi abalutho ngaphandle kwabadwebi abanentshisekelo kuphela ekutheni isayithi libukeka kanjani ngobuciko ngoba yileyo ndlela abacabanga ngayo nabakuqondayo.
UMichael Ray Hopkin
Jan 21, 2009 ngo-4: 54 PM
UDoug, Isitatimende sakho "Bhala okuqukethwe okuhambisanayo, okuphoqelelayo futhi ungayinqoba le mpi ekusesheni" kulungile emalini. Isifundo engisifundile: khetha isihloko osithandayo, bhala kaningi bese uxhuma nabanye. Ngemuva kwesikhathi esingaphezu konyaka sekuqala ukusebenza. Yebo yebo, futhi umshini wokubala we-Tuned In ube usizo olukhulu. -UMichael
Jan 27, 2009 ku-8: 26 AM
Uqinisile ukuthi impumelelo yewebhusayithi ekubhaleni i-hetting ingabangelwa kokuqukethwe nama-backlinks. Noma kunjalo, awukwazi ukulahla ochwepheshe be-SEO ngokuphelele. Iyona nto ababizwa ngayo ngochwepheshe be-SEO ukuthi bayazi ukuthi benzeni kwiwebhusayithi yakho ukuyenza ifike ezingeni eliphezulu lekhasi le-google.